((( မတင်ရွှေနှင့် ဖေ့စ်ဘုတ် ))) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Ashin Ko Salla
အကြောင်းမှာ မတင်ရွှေကြောင့်ဖြစ်သည်။ မတင်ရွှေကို
"မြို့က စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံသို့ ပို့ရမလား၊ ဆရာတော့်ဆီက ရေမန်းတိုက်ရမလား" ဝေခွဲမရဖြစ်နေသည်။
တိတိကျကျဆိုရလျင် ရောဂါက မတင်ရွှေလက်ထဲ မှန်ထောက်ရောက်လာပြီးနောက်မှ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ "ဆရာတော့်ဆီက ရေမန်းနဲ့မရမှ မြို့သွားသာပါ့ " ဟု တွေးကာ "ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်မည်" အကြောင်းပြပြီး မတင်ရွှေကို ဆရာတော့်ဆီ ခေါ်လာခဲ့တော့သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တလင်းတက်တုန်းက ငါးသိန်းခွဲဈေးနှင့်မိသဖြင့် စပါးလေးရာ ရောင်းလိုက်သည်။ စပါးရောင်းပြီး ဘာမကြာ မတင်ရွှေက "မှန်ထောက်ရချင်သယ်" ပူဆာသည်။
ရွာထဲမှာက ဟိုလူက မှန်ထောက်၊ သည်လူက မှန်ထောက်နှင့် ဆိုတော့ 'မတင်ရွှေလည်း လိုချင်ရှာမှာ' ဟုတွေးကာ ကူးလ်ပက် (Coolpad) မှန်ထောက်လေးတစ်လုံး ဝယ်ပေးလိုက်သည်။
နောက်တော့ ရွာထဲက ကလေးမတွေက မတင်ရွှေကို ဖေ့စ်ဘုတ်အကြောင်းပြောပြကြတော့
" ဖေ့ဘုတ်ဖောက်ချင်သယ်" ဖြစ်လာသည်။ ပြဿနာက အဲ့သည်မှာ စ,သည်။ ကိုသောင်းဖေအနေနဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိတာ မတင်ရွှေက "ဖေ့စ်ဘုတ်ဖောက်ချင်သယ်"ဆိုတော့ ပိုဆိုးသွားသည်။ ဒါတော့ ကိုသောင်းဖေ လုပ်မပေးတတ်။
" ကိုသောင်းဖေရယ် ငထွန်းကို သွားခေါ်လိုက်ပါ၊ ကျုပ်ဒါလေးပြီးအောင် ချက်လိုက်ဦးမယ်၊ ဟိုနေ့က ငထွန်းနဲ့တွေ့တော့ ဖေ့ဘုတ်ဖောက်ပေးမယ်ပြောသယ်၊ အဲ့သာ ငထွန်းကို သူ့စက်ပါ တစ်ခါတည်းယူခဲ့ပါ လို့ ပြောလိုက်ဦး "
မတင်ရွှေက ချဉ်ရည်အိုးမွှေရင်း လှမ်းပြောသည်။ ငထွန်းဆိုတာ ရွာမြောက်ပိုင်းက လက်သမားဆရာ။ "မြို့အရောက်အပေါက် များတော့ ငထွန်းက ဒါမျိုးတွေလုပ်တတ်လို့ နေမှာပါ့" ဟုတွေးကာ ကိုသောင်းဖေ ထွက်လာလိုက်သည်။
ငထွန်းအိမ်ရောက်တော့ ကိုသောင်းဖေတစ်ယောက် "ဖောက်တာ"ပဲ သတိရပြီး 'ဖေ့စ်ဘုတ်'ဆိုတာကို မေ့နေသည်။ သို့နှင့် " ငထွန်းရေ့ မင်းအစ်မက ဘာဖောက်ချင်လို့ဆိုလား၊ အဲ့သာ မင်းစက်ပါ ယူပြီးလာခဲ့ပါ တဲ့ " ဟုပြောပြီး ပြန်ခဲ့လိုက်သည်။
ကိုသောင်းဖေ အိမ်ရောက်ပြီးသိပ်မကြာခင် ငထွန်းရောက်လာသည်။ လက်ထဲမှာတော့ လက်သမားလုပ်ရာ၌သုံးသော သစ်သားဖောက်သည့် မော်တာလွန်ဖူးစက်ကြီးနှင့်။ အခုမှ ကိုသောင်းဖေ နားလည်သည်။ ဖေ့စ်ဘုတ်ဆိုသာ လွန်နှင့်ဖောက်ရသည်ကိုး။
သို့သော် မတင်ရွှေနှင့် ငထွန်းတို့နှစ်ယောက်သား မှန်ထောက်ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး တစ်နာရီလောက် ဟိုပွတ်သည်ပွတ်လုပ်ကာ ဖေ့စ်ဘုတ်ဖောက်လို့ ပြီးသာသွားသည်။ ကိုသောင်းဖေတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့အိမ်နောက် ကူးလူးနေသဖြင့် မော်တာလွန်ဖူးကို ဘယ်လိုသုံးသည် မသိလိုက်ရ။
ငထွန်းလာ၍ ဖေ့စ်ဘုတ်ဖောက်ပေးပြီးနောက် မတင်ရွှေ၏ အခြေအနေပိုဆိုးလာသည်။ ဘယ်အချိန်မဆို မှန်ထောက်ကိုသာ ပွတ်နေတော့သည်။
တစ်ခါ တစ်ခါ မှန်ထောက်ကိုကြည့်ကာ မျက်ရည်ဝိုင်းနေသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်သည်။ တစ်ခါတစ်ခါ မငိုမရယ်နှင့် တွေတွေကြီးလုပ်နေတတ်သည်။
အဆိုးဆုံးအချက်မှာ မတင်ရွှေဘာလုပ်လုပ် ဟန်ပန်ထုတ်ကာ မှန်ထောက်ကို မှန်လိုထောင်၍ ကြည့်ကြည့်နေခြင်းပင်။ မတင်ရွှေကတော့ "ဓာတ်ပုံရိုက်သာပါ ကိုသောင်းဖေရယ်" ဟုပြောသည်။ အဲ့သည် လက်တစ်ဝါးစာလေးက ဓာတ်ပုံလည်း ရိုက်လို့ရသည် ဟုသိရသောအခါ ကိုသောင်းဖေ အံ့သြမိသည်။ ပိုအံ့သြမိသည်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရိုက်၍ ရနေခြင်းပင်။
မတင်ရွှေကတော့ ရေချိုးရင်းလည်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ အိမ်သာသွားလျင်လည်း သည်မှန်ထောက်နှင့်။ ထမင်းမစားခင်လည်း ထမင်းဝိုင်းကို အပေါ်ကမိုး၍ ရိုက်ပြန်သည်။ ဆွမ်းတော်မကပ်ခင် ဆွမ်းတော်ခွက်ကိုရိုက်သည်။ ထင်းခွဲနေရင်းတန်းလန်း ဓားမကို ကိုင်၍ ရိုက်သည်။ မြက်ရိတ်ပြန်လာလျင်လည်း မြက်ထုံးကို ခေါင်းပေါ်ကမချခင် ရိုက်ပြန်သည်။
ကိုသောင်းဖေ သတိထားမိသည့်အချက်မှာ မတင်ရွှေဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်း လက်နှစ်ချောင်းကိုထောင်၍ ပါးကိုဖောင်းအောင်လုပ်ကာ ရိုက်ခြင်းပင်။ မတင်ရွှေမျက်နှာက ပါးချောင်ကျသော်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်လျင် ပါးဖောင်းဖောင်း လာသည်ကို ကိုသောင်းဖေ အံ့သြသဖြင့် မေးကြည့်တော့
" လွယ်လွန်းလို့ ကိုသောင်းဖေရယ်၊ ဟော့သည်မှာ"ဟုဆိုကာ မတင်ရွှေက သူ့ခါးကြားက ဇီးဖြူသီးကိုထုတ်၍ ပါးစောင်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည်။
" ကွီးသောင်းဖေ ! "
" ကွီးသောင်းဖေလို့ "
" ဟောတော်! ကိုသောင်းဖေ နားကန်းနေသာလား၊ တော့် ခေါ်သာ! တော့်ခေါ်သာ သေနာရီးရဲ့!"
မတင်ရွှေက ဆေးလိပ်မီးညှိနေသော ကိုသောင်းဖေကို ပေါင်ပုတ်လိုက်မှ ကိုသောင်းဖေ လန့်သွားသည်။ အမှန်က မကြားတာမဟုတ်။ နားမလည်ခြင်းဖြစ်သည်။
" ဟ! တင်ရွှေရာ ငါ့ခေါ်သာကို ဘယ်လိုခေါ်နေသာတုန်းဟာ "
" တော်ကလည်း တုံးပါ့ တုံးပါ့၊ ကွီးဆိုသာ ကိုကြီးလို့ခေါ်သာတဲ့ ဟော့သည်မှာ"
"ဟော့သည်မှာ"ဆိုပြီး မတင်ရွှေက မှန်ထောက်ကိုရှေ့ထိုးပြ၍ ကြည့်လိုက်ရသော်လည်း ကိုသောင်းဖေ အမြင်မရှင်း။ စာအချို့နှင့် ဓာတ်ပုံအချို့သာမြင်ရသည်။
" ဒီမယ်လေ ကိုသောင်းဖေ၊ သာက ကျုပ်အကောက်နာမည် "
ကိုသောင်းဖေကြည့်ရပြန်သည်။ ဓာတ်ပုံနေရာ၌ ကိုးရီယားမင်းသမီးတစ်ယောက်ပုံကို မြင်ရသည်။ နာမည်နေရာ၌--------
မမြင်ဖူးသလိုကြည့်နေမိသည်။"တင်ကလျာချစ်သန္တာလှလှရွှေ"က အကောက်နာမည်ဆိုတော့ သူခေါ်နေကျ "မတင်ရွှေ" ဆိုတာက အဖြောင့်နာမည်လား။ ကိုသောင်းရွှေတစ်ယောက် ခေါင်းရှုပ်သွားရသည်။
ကိုသောင်းဖေအတွက် အထူးဆန်းဆုံးမှာ မတင်ရွှေက
" လိုင်းပေါ်တက်ဦးမယ်"ဟုဆိုကာ အိမ်ပေါ်တက်တက် သွားသာပဲဖြစ်သည်။ 'လိုင်းပေါ်ဆိုသာ ထုတ်တန်းပေါ်များ ပြောသာလေလား'ဟု ကိုသောင်းဖေတွေးမိသေးသည်။ ဟိုနေ့ကတော့ ရွာလယ်က မမြရီသား မောင်ပိန် ကောက်လှိုင်းပုံပေါ်တက်တာ၊ ပြုတ်ကျ၍ ခါးနာသွားသည်ဆို၏။ ထို့ကြောင့်--------------
" အင်း အင်း မတင်ရွှေ၊ လိုင်းပေါ်တက်ရင်လည်း မြဲမြဲကိုင်ထား၊ တော်ကြာ ပြုတ်ကျလို့ ကျိုးနေဦးမယ် " ဟုသတိပေးဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးကောင်းကြီးမှ "ပြုတ်ကျလို့ ကျိုးသတဲ့" ဆို ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းဖြစ်မှာစိုးရသည်။
" ဒီမယ်လေ သာက ကျုပ်တို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပုံ၊ ဟိုနေ့က ငထွန်း တက် (tag) လုပ်ပေးသာ၊ ဓာတ်ပုံတွေကို ပို့စ်(post) လုပ်ရင် အဲ့သလို တက်(tag)လုပ်ရသယ်၊ သူများက တက်(tag)လုပ်တဲ့အခါ ကြိုက်ရင် လိုက်(Like) ပေးကြသာပါ့ တော်ရယ် "
ကိုသောင်းဖေ ခေါင်းကြီးသွားရသည်။ "တက်လုပ်ပေးတာ"တဲ့။ ဓာတ်ပုံတွေကို ပို့ပေးရသာ တဲ့။ ပြီးတော့ ကြိုက်ရင် လိုက်ပြေးကြသတဲ့။ မတင်ရွှေပြောတာကို ကိုသောင်းဖေကတော့ သည်လိုပဲနားလည်သည်။ စိတ်လည်းအတော်ပူသွားကာ မတင်ရွှေကို စိုက်ကြည့်နေမိသည်။
"ငါတို့အိမ်ထောင်သက် ဆယ့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ငါတစ်ခါမှ အမှားမလုပ်မိပါဘူး "ဟုလည်း ကိုသောင်းဖေ တွေးနေမိသည်။
ကြာတော့ ကိုသောင်းဖေတစ်ယောက် မတင်ရွှေအခြေအနေကို စိုးရိမ်စ,ပြုလာသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆရာတော့်ဆီ ခေါ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တော့သည်။
" အိမ်း----ဒီနေ့ ဝါဆိုလဆန်း(၈)ရက်မှာ ဒကာကြီးဦးသောင်းဖေ၊ ဒကာမကြီး ဒေါ်တင်ရွှေ မိသားစုတို့၏ ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြရာ အခါသမယ၌
ဆရာတော်က ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူရခြင်းအကျိုးကို ဇာတ်ကြောင်းများ သာဓကများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဟောပြသည်။ ကိုသောင်းရွှေက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လက်အုပ်ချီရင်း မတင်ရွှေကိုအကဲခတ်နေသည်။ မတင်ရွှေက တစ်ခုခုပြုလုပ်ချင်ဟန်ဖြင့် မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက် ဘေးကိုကြည့်လိုက် ကိုသောင်းဖေကိုကြည့်လိုက် လုပ်နေသည်။
" ကဲ ကဲ သင်္ကန်းကပ်ကြရအောင်---အင်း---ဟုတ်ပြီ ခဏကိုင်ထားပြီး လိုက်ဆိုကြ "
" တင်ပါ့ဘုရာ့ "
" မယံ ဘန္တေ"
" မယံ ဘန္တေ "
" ဝဋ္ဋ ဒုက္ခတော "
" ဝဋ္ဋ ဒုက္ခ----အဲ ဒုက္ခတော့် ဟုတ်ပါ့-ဒုက္ခပါပဲတော်! ကိုသောင်းဖေ၊ ဘုန်းဘုန်း ဒုက္ခတော ဆိုမှ သတိရသာ၊ ခဏ ခဏ ခဏလေးဘုရာ့"
မတင်ရွှေက ဆရာတော်တိုင်ပေးတာကို လိုက်ဆိုရင်းတန်းလန်း "ဒုက္ခပါပဲတော်" ဟုဆိုကာ ကျောင်းအောက်ကို အပြေးတစ်ပိုင်း ဆင်းသွားသည်။
ဆရာတော်ရော ကိုသောင်းဖေပါ နားမလည်။ သို့ပေမယ့် မတင်ရွှေအောက်ဆင်းသွားတာကို အခွင့်ကောင်းယူ၍
" ဘုန်းဘုန်း ရတနသုတ်လေးရောနော်ဘုရာ့" ဟု ထပ်လျှောက်လိုက်သည်။ ခဏနေတော့ မတင်ရွှေ အပေါ်ပြန်တက်လာသည်။
" ရပြီ ဘုရာ့၊ ဘုန်းဘုန်း! အစ,ကနေ ပြန်တိုင်ပေးပါ" ဟုဆိုသဖြင့် ဆရာတော့်ခမျာ " မယံ ဘန္တေ----"ကို အစအဆုံး ပြန်တိုင်ပေးရသည်။
" ကဲ ရပြီ ကပ်တော့ "
အစအဆုံးပြန်တိုင်ပေးပြီးတော့ ဆရာတော်က သင်္ကန်းအကပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုစဉ် မတင်ရွှေက တဘက်ကြားထဲက ဖုန်းကို ထုတ်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် ပြင်တော့သည်။
" ဘုန်းဘုန်း သင်္ကန်းကို ကိုင်ထားဦးဘုရာ့၊ ခုနက အောက်ကခြင်းထဲမှာ ဖုန်းမေ့နေခဲ့လို့ သွားယူလာသာ၊ အဲ ကိုသောင်းဖေ ကိုင်ထားလေ၊ ဟုတ်ပြီ---ခဏလေးနော် ခဏလေး"
မတင်ရွှေက သူ့ထုံးစံအတိုင်း ခါးကြားမှ ဇီးဖြူသီးတစ်လုံးကို ပါးစောင်ထဲ ပစ်ထည့်ကာ လက်နှစ်ချောင်းထောင်၍ ပါးတွင် ကပ်လိုက်သည်။
" နောက်တစ်ပုံရိုက်မယ်နော် ဘုန်းဘုန်း၊ ပြုံးထားဘုရာ့ ပြုံးထား၊ ဟောတော် ကိုသောင်းဖေ--လက်ထောင်လေ "
ဆရာတော့်မှာ ပြုံးထားဆို၍ပြုံးနေရသော်လည်း စိတ်ထဲကတော့ မေတ္တသုတ်ကိုရွတ်နေလေပြီ။ ကိုသောင်းဖေခမျာမှာတော့ မတင်ရွှေကိုတစ်လှည့် ရေမန်းပုလင်းကိုတစ်လှည့် အကြည့်ရောက်ကာ စိတ်မသက်မသာဖြင့် သက်ပြင်းကိုသာ ချနေမိတော့သည်။
[ မှတ်ချက်။အချို့နယ်များတွင် ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဖွင့်သည်ကို 'ဖေ့စ်ဘုတ်ဖောက်'သည်။ တပ်စကရင်(touch screen)ကို 'မှန်ထောက်'ဟုခေါ်ကြသည် ) ။
၂၈၊ ၆၊ ၂၀၁၆။